ओली र प्रचण्डलाई मिलाउने ‘खेलाडी’ को-को हुन् ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
ओली र प्रचण्डलाई मिलाउने ‘खेलाडी’ को-को हुन् ?
काठमाडौँ, ३ जेठ । नेकपा एमाले र माओवादीबीच झण्डै टुटेको एकता आश्चर्यजनक रुपमा जोडिएको छ । पार्टी एकता र सरकार संचालनका विषयमा अनेक टिकाटिप्पणीहरु छताछुल्ल भइरहँदा बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षबीचको बैठकले निर्णायक मोड लियो । दुई नेताबीचको असमझदारी हटाउने मात्रै होइन्, एकाएक पार्टी एकतामै पुग्ने गरी वातावरण बन्यो ।
आखिर कसरी सम्भव भयो ?
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेलहरु जसरी पनि माओवादीसँग पार्टी एकताका लागि जोडबल गरिरहेका थिए । अझ आफूले पार्टीको कमाण्ड सम्हालेका बेला एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने निर्णयमा एमाले अध्यक्ष ओली दृढ थिए । उनको त्यही आत्मविश्वासले बुधबार काम गर्यो । जसका लागि पुलको काम गरे, एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले ।
उच्च स्रोतका अनुसार, पौडेल ओली र प्रचण्डबीच मध्यस्थता गरिरहेका थिए । यो बीचमा पटकपटक ओली र प्रचण्डबीच भेट भयो । तर, ती सबैलाई गोप्य राखिए । कतिपय बैठकमा ओली र प्रचण्ड बसेर मन माझामाझ गरे भने कतिपय बैठकमा पार्टीका शीर्ष नेता पनि सामेल भए ।
मंगलबार बिहान एमाले उपमहासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष ओलीलाई बालुवाटार आएर भेटे । दिउँसो प्रचण्डसँग बसेर छलफल गरे । साँझ प्रचण्डको सन्देश बोकेर उनी बालुवाटार आए । प्रचण्डको प्रस्तावलाई ओलीले स्वीकार मात्रै गरेनन्, बुधबार भेटेर निर्णायक मोडमा पुग्ने निष्कर्ष निकाले ।
यो बीचमा पार्टीका शीर्ष नेता र ओलीको सल्लाहकार समूहले पनि वातावरण बनाउन मद्दत गर्यो । बुधबार कुराकानीमा एमाले उपमहासचिव पौडेलले भनेका थिए- ‘हाम्रो प्रयास सार्थक भएको छ । त्यसमा गर्व लागेको छ ।’
उता माओवादीतिर जनार्दन शर्माको उत्तिकै भूमिका रह्यो । चुनाव अघि एमालेको सूर्य चिन्हमा चुनावमा जाने गरी सहमति गराउने नै जनार्दन थियो । तर, भोलिपल्टै माओवादीमा विरोध भयो । र, माओवादी आफ्नै चिन्ह बोकेर चुनावमा होमियो । यो बीचमा पनि जनार्दनले एमाले र माओवादीका नेतासँग पटकपटक छलफल गरेका थिए । ओली, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग उनको बाक्लै छलफल भए । प्रचण्डलाई आफ्नै नेताहरुले अनेक गरी उक्साइरहँदा पनि माओवादीभित्र जनार्दन मात्र यस्ता पात्र हुन्, जो निरन्तर एकताका लागि उभिइरहे । यो बीचमा एकताविरुद्ध उनको कहिल्यै अभिव्यक्ति नआउनु पनि त्यसकै कारण थियो ।
यसो त ओलीले जनार्दनलाई आफू नेतृत्वको सरकारमा समेत सामेल गराउन चाहन्थे । माओवादीले उनको नाम पठाइदियोस् भन्ने ओलीलाई थियो । तर, जनार्दन मन्त्रिमण्डलमा छुटे । यद्यपि उनले कुण्ठा बोकेनन् । बरु प्रचण्डलाई पार्टी एकताका लागि बल दिने काम गरिरहे । पार्टीका एकताका लागि पुलको काम गर्ने नयाँ पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यका रुपमा रहनेछन् ।
बिभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको दबाब छल्दै अन्ततः एमाले र माओवादीका नेताहरु एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउन सफल भएका छन् । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली पार्टी बन्न सफल भएको छ ।
(शारदा गैरेले दैनिक नेपाल मा लेखेकाे साभार )